विहेको भोजमा मासु नदिएको भन्दै भक्कु ल डाईँ, १ जनाको ज्यान गयाे, ३ जना गम्भीर घाईते - News 88 Post
जानकारी अनुसार तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । मृ तकको पहिचान राजेन्द्र सिंहका रुपमा भएको छ । उक्त घटनामा घाइते हुनेहरुमा राहुल कुमार सिंह, रिशु कुमार सिंह र रोहित कुमार सिंहलाई रहेका छन् ।
शुरुमा उनीहरुलाई उपचारका लागि गोपालगञ्ज सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा भर्ना गरियोे । त्यहाँ चिकित्सकहरूले प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि गोरखपुर रिफर गरेका छन् । त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूले तीन जना घाइतेलाई गोपालगञ्ज अस्पतालबाट उपचारका लागि गोरखपुर पुर्याएका हुन् ।
घटनाको सम्बन्धमा, यो भनिएको छ कि राजेन्द्र सिंहको छिमेकमा जन्ती आएको थियो । जन्तीमा कुखुराको मासुसँग लिट्टी नदिएको भन्दै विवाद सुरु भयो । त्यहाँ विवाद एकदम उग्र भएको थियो । घटनामा राजेन्द्र सिंहलगायत चार जनालाई क’टट्टा प्र’योग ग’रियो । चारैजनालाई उपचारको लागि गोपालगञ्ज सदर अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा भर्ना गरिएको थियो ।
त्यहाँका डाक्टरहरूले राजेन्द्र सिंहलाई मृ त घोषित गर्दिए । तीन जना गम्भीर घाइतेहरुलाई अर्को अस्पताल पठाइयो । जब डाक्टरहरूले ती तीन जनाको एक्स–रे गर्न खोजे तब पत्ता लाग्यो कि एक्स–रे कोठा बन्द छ । त्यसपछि, परिवारका सदस्यहरू र अन्य व्यक्तिहरुले एक्स–रे बन्द भएकोमा रिसाउँदै प्रदर्शन गर्न थाले ।
घटनास्थलमा पुगेपछि प्रहरी चौकीका उपनिरीक्षक नय्याज अहमद र बीएन राईले परिवारका सदस्यहरूलाई सावधानीपूर्वक शान्त गराए । प्रहरीले तीन जना घाइतेहरुलाई एम्बुलेन्समा राखेर राम्रो उपचारका लागि गोरखपुर पठायो । उचाकागाउँ थानाका प्रमुख अब्दुल मजेदले घटनाबारे सूचना पाए पछि प्रहरी टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान गर्न थप अनुसन्धान शुरु गरिएको छ ।
बाल्टीमोरमा गोलीकाण्ड : एक नेपालीको मृत्यु, एक घाइते
संसद बिउँतिए प्रधानमन्त्री काे बन्छ ? देउवा की माधव नेपाल !
गण्डकी प्रदेशमा नेपाल-खनालद्वारा समानान्तर कमिटी घोषणा, हेर्नुस् कहाँ कसकाे नेतृत्व
April 1, 2021 N88
१० लाख बोकेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तीर्थाटनमा